Haddii aan weydiiyo aqoonyahan kasta oo tiknoolaji ah nooca faylka dhawaaqa aasaasiga ah ee internetka iyo wixii ka baxsan, waa inay dhahaan MP3. Waa halbeeg heer sare ah oo la tuujiyey oo ilaalinaya tayada codka ay dadku maqlaan. Taasi waxay tiri, haddii aan ahaan lahaa Apple (ama Microsoft), waxaan u maleynayaa inaan ku soo bandhigi lahaa MP3 feyl caadi ah oo u dhexeeya barnaamijyadeyda.
Nooca faylka ee caadiga ah ee Apple ayaa ah aiff. Ma maqashay midkoodna? Ilaa aad ka shaqeyneyso Mac mooyee, malaha maya.
Adiga adiga mac gurus ah, madaxayga waan ka bixi karaa Fadlan i sax haddii aan khaldanahay, laakiin waxaan soo maray dhowr barnaamijyo ka hor inta aanan fahmin sida loo beddelo mid aiff u fayl MP3